नेकपा भित्रको 'विद्रोह'
नेकपा भित्रको 'विद्रोह' - Nepal Talk
नेकपा भित्रको ‘विद्रोह’
बैशाख ७ गते, २०७६ मा प्रकाशित
नेकपाका तीन शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अचेल बाक्लै छलफलमा बस्छन्। बसाइको ‘मक्सद’ एउटै हुन्छ- जिल्ला तहको पार्टी कमिटीको फर्मेसन। जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी (अध्यक्ष र सचिव मात्र) चयनमा नेताहरूका आआफ्नै रुचिका पात्र छन्।
कसलाई नेतृत्व दिने, कुन विधिका आधारमा दिने भन्नेमा नेताहरू आआफ्नै अडानमा छन्। आफ्नो पक्षका नेता व्यवस्थापनको हिसाब किताब गर्छन्। फेरि अर्को पटक बस्ने गरी छुट्टिन्छन्। यो क्रम यही हप्ता मात्रै पनि पाँचौं पटक दोहोरिइ सकेको छ। कुनै दिन दुई तीन पटक सम्म छलफलमा बसेका छन्। तर, निष्कर्ष निकाल्ने गरी कुनै छेउटुप्पो उनीहरूले फेला पारि सकेका छैनन्।
जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी धारका दुई पार्टी एकता गर्दा नै जिल्ला तहको कमिटी सहितका सम्पूर्ण तहको एकता प्रक्रिया तीन महिना भित्र सिध्याइ सक्ने कार्ययोजना यिनै नेताहरूले बनाएका थिए। नेकपा विधानको व्यवस्था अनुसार पार्टीका सम्पूर्ण कमिटी फर्मेसन भइ सक्दा उसका झन्डै चार लाख नेता-कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष पार्टी कमिटीको जिम्मेवारी पाउँथे। तर पार्टी एकता भएकै ११ महिना बिति सक्दा पनि जम्माजम्मी १८२५ जना नेता-कार्यकर्ताले मात्र पार्टी कमिटीको जिम्मा पाएका छन्।
एकतामा विलम्ब किन भइ रहेको छ ? शीर्ष नेताहरूलाई एकता प्रक्रिया टुंग्याउन किन सकस परि रहेको छ ? नेकपाकै स्थायी समिति सदस्य गणेश शाहको भनाइमा यसो हुनुका पछाडि मुख्य दुई कारण छन्, पहिलो-पार्टी एकतापूर्व सरकारमा साझेदारी सहितका सर्त र दोस्रो- पार्टी सत्तामा आगामी महाधिवेशनमा हुने पावर सेयरिङ।
पार्टी भित्रको यस्तो छद्म लडाइँमा ओली, प्रचण्ड र नेपाल तीनै जना तयारीका साथ लागेका छन्। नेकपाले दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्ने सहमति अनुसार पार्टी एकता गरेको थियो। त्यस बीचमा झन्डै एक वर्ष बितेको छ। बोलीमा वचनबद्धता देखाउने हो भने अर्को वर्षसम्म पार्टी महाधिवेशन गरेर नेकपाले अहिलेको ‘जोर पाइलट’ बाट एउटै पाइलटको नेतृत्व खोज्नु पर्ने छ।
पार्टी एकताको चार महिनासम्म नेकपा भित्र नेताहरूका असन्तुष्टि पोखिएका थिएनन्। भिन्न ‘स्कुलिङ’ बाट आएका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा भएको एकताले नेता–कार्यकर्तामा खुसीयाली नै थियो। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले मर्यादाक्रममा आफूलाई पछाडि पारिएको भन्दै राखेका असन्तुष्टि बाहेक अन्य कुनै नेताले असन्तुष्टि पोखेका थिएनन्। तर वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टी भित्रको मौनतालाई धेरै समय टिक्न दिएनन्। उनले असन्तुष्टिहरू फायर गर्न थाले।
असोज ५ मा उनको अनुपस्थितिमा सचिवालयले गरेको प्रदेश पदाधिकारी चयनको निर्णयमा महासचिवमार्फत असहमति पत्र दर्ता गराउनेदेखि स्थायी समिति सदस्यहरूका लागि चियापान कार्यक्रमसम्म पनि उनले आयोजना गरे।
पार्टीका दुवै अध्यक्ष देशबाहिर रहेका बेला संसद्मा बोल्दै नेपालले ‘देश डुब्न लागेको र किनारा लगाउने माझी छ/छैन’ भन्दै आफ्नै पार्टी अध्यक्ष ओलीले चलाएको सरकारको ‘चर्को आलोचना’ गरे। त्यस पछि नै हो, नेकपामा सुरु भएको नेताहरूका बीचमै आरोप-प्रत्यारोप। ओलीनिकट स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डल भन्छन्, ‘पार्टी भित्र तथाकथित गुटहरू निर्माण गर्ने काम हुँदै आएको छ। संस्थापनको कुरा नमानेर आफैंले भनेको मात्र हुनुपर्छ भन्ने योजनामा उहाँहरू (माधव नेपाल पक्ष) लाग्न खोज्नु भएको छ। सधैं त्यसरी पार्टी चल्दैन।’
तर नेपाल पक्ष पार्टीमा ओली पक्षले व्यक्ति टिपेर जिम्मेवारीमा पुर्‍याउने, त्यसका लागि कुनै विधि/प्रक्रिया नमान्ने अवस्था आएपछि नेता नेपाल लगायतले पार्टीमा आवाज उठाइरहेको बताउँछ। वरिष्ठ नेता नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडा भन्छन्, ‘पार्टी एकताको काम गर्दा निश्चित विधि बनाएर गर्नुपर्छ। हुबहु सिद्धान्त विधिमा पास गर्नुपर्छ र त्यही आधारमा एकता टुंग्याउनुपर्छ। मनपरी मान्छे उहाँहरू (ओलीपक्ष) ले टिपेर जिम्मेवारी दिन खोज्नु भएको छ। त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने माधव नेपालसहितका नेताहरूका कुरा छन्।’
माओवादी भित्र भने तत्कालीन पार्टी भित्रको आन्तरिक भागबन्डामा विवाद देखिएको छैन। ७७ जिल्लामध्ये एकताका क्रममा तत्कालीन एमालेलाई ४५ र माओवादी पक्षलाई ३२ जिल्लाको नेतृत्व बाँडफाँट गर्ने सहमति भए पनि नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा देखिएको विवाद भित्र आगामी महाधिवेशन लक्षित वर्चस्वको टकराव मुखरित हुन पुगेको नेताहरूकै बुझाइ छ।
‘केन्द्रको एकतासम्म माओवादी र एमाले भागबन्डा थियो। तर त्यस भन्दा तल्ला कमिटीको एकतामा आएपछि भने यी दुई पक्षको भागबन्डा त छँदै थियो, साथमा थपिएको छ कुन गुटका कति ? ’ एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘पार्टीमा कसको वर्चस्व रहने भन्ने छ? लडाइँ सुरु भइ सकेको छ। त्यसैको रिहर्सल अहिले मुख्य तीन नेताहरू ओली, प्रचण्ड र नेपालले गरि रहेका छन्।’
तल्लो तहको एकता, पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यहरूकै कार्य विभाजन, केन्द्रीय विभागहरूको गठन, जनसंगठनहरूको एकतामा नेताहरूबीच देखा पर्न थालेको प्रतिस्पर्धा पार्टी भित्रका सहकर्मीका रूपमा भन्दा विरोधीका रूपमा देखिन थालेका छन्। भावी नेतृत्वका आकांक्षीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने परिपाटी देखा परेकाले नेतृत्वको टकराव अरू बढ्न सक्ने र त्यसले पार्टीलाई संकटमा पुर्‍याउन सक्ने आशंका पनि जन्मिन थालिसकेको छ।
तत्कालीन पार्टीका सदस्यताको केन्द्रीकरण, कमिटीहरूको फर्मेसन, राजनीतिक दस्ताबेज निर्माण लगायतका विषयमा छलफल गर्न अबको एक वर्ष समयको हिसाबले अपर्याप्त देखिए पनि महाधिवेशन लक्ष्यित दबाब भने नेकपमा बढ्ने नै देखिन्छ।
नेकपाभित्र देखिने गरी नै तीन धार छन्। अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपालका आआफ्नै समूह छन्। यी तीन समूहका आआफ्नै च्याँखे दाउ छन्।
ओली आगामी नेतृत्वका लागि बोलिसकेका त छैनन् तर अझै नेतृत्व छोडिहाल्ने पक्षमा छैनन्। पार्टीभित्र र बाहिर उनका कट्टर समर्थक या चर्का आलोचक मात्र भेटिन्छन्। नेपाली राजनीतिमा उनी छुट्टै ‘लिगेसी’ बनाउने बृहत्तर आकांक्षामा रहेको टिप्पणी विश्लेषकहरू गर्छन्।
आफ्नो स्थान इतिहासमा कहाँ बनाउने भन्ने स्वाभाविक महत्वाकांक्षा ओलीले जीवनको उत्तरार्धमा देखाएका छन्। त्यसकारण उनी पनि पार्टी भित्रै आफ्नो ‘लिगेसी’ निर्माणमा लागेको देखिन्छ। आफूले बाँडेको सपना पूरा गर्न सक्ने र टुटफुटमा रहेको कम्युनिस्ट एकता गराएको जस लिने पक्षमा ओली देखिन्छन्। यस अर्थमा पनि उनी आगामी नेतृत्वका लागि बोलि हालेका छैनन्।
प्रचण्डले भने आशा देखाइसकेका छन्। पार्टी एकता गर्दै भावी अध्यक्षको दाबी उनले गरिसकेका छन्। एकता क्रममा भित्री चारबुँदे सहमति ओलीसँग भएको समझदारीबाट प्रचण्ड विश्वस्त देखिन खोजेका छन्। ‘लिडरसिप र लाइनका विषयमा आधारभूत सहमति बनाएरै पार्टी एकता गरिएको छ’ प्रचण्डले आफू निकट नेताहरूसँग भन्ने गरेका छन्, ‘आउने महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउने गरी भोटिङ गरेर भन्दा समझदारीमा नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने एकताको आधार छ।’ आउने महाधिवेशनबाट एकीकृत पार्टी र सरकार दुवैको मूल नेतृत्व आफ्नो हातमा ल्याउने तयारीमा प्रचण्ड देखिएका छन्। ‘कुनै कन्फ्युजन छैन अधिवेशनसम्मका लागि’, उनी आफ्ना निकट नेता-कार्यकर्तासँग भन्ने गर्छन्।
तर वरिष्ठ नेता नेपाल प्रचण्डको सोचअनुसार पार्टी राजनीति जान दिने पक्षमा देखिन्नन्। पार्टी भित्रको बहुमत हिस्सामा रहने तत्कालीन एमाले धारबाटै आगामी नेतृत्व लिनु पर्ने पक्षमा उनी छन्। त्यसका लागि आफ्नो दाबी दोहोर्‍याइ रहेको देखिन्छ। मदन भण्डारीको निधन पछि २०६४ को चुनावसम्म तत्कालीन एमालेमा नेपाल पार्टी सर्वोच्च पदमा थिए। त्यसपछि झलनाथ खनाल र २०७१ पछि ओलीले नेतृत्व गरे पछि उनले सर्वोच्च पदमा पुग्ने अवसर पाएका छैनन्।
उनी उक्त पद हत्याउने तयारीमा लागेका छन्। ओलीनिकट स्थायी समिति सदस्य मण्डल भन्छन्, ‘माधव कमरेडले विधि, मापदण्डको विषय अहिलेदेखि नै उठाइरहनुभएको छ, झलनाथ खनाललाई वरिष्ठको मर्यादमा आफू भन्दा तल राख्दा विधि नमिचिने अनि अरूबेला मिचिने भन्ने उहाँको तर्क नै मिल्दैन।’
नेपालले अहिले पार्टीभित्र लिइरहेको अडान आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी र सरकार दुवैमा कब्जा जमाउने उद्देश्यअनुरूप आएको मण्डल बताउँछन्। ‘पार्टी कब्जा गरेर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्ने उहाँ ९माधव नेपाल० मा आकांक्षा छ’ मण्डल भन्छन्, ‘त्यसैभित्रको रडाको उहाँले मच्चाउन खोजि रहनु भएको छ।’
तीन शीर्ष नेताबाहेक अन्य नेताहरू पनि छन् नेकपामा। जो, आफ्नो भविष्यका लागि राजनीति हलचल गराउन सक्छन्। त्यस्तै मध्येका पात्र हुन् ईश्वर पोखरेल पनि। दुईपटक महासचिव भइ सकेकाले नेतृत्वमा उनको दाबी पार्टी एकता अगाडि सम्म स्वाभाविक थियो। त्यो आकांक्षा उनमा अझै छ। वामदेव पार्टीभित्र सत्तरी बर्से उमेर हद नभए पछि आंकाक्षी छन्। झलनाथ आफैं कस्सिएका छन्। पार्टीमा गुट नभएका कारण पछाडि पारिएको भन्दै उनी आफैं गुट बनाउने बताउँदै हिँड्न थालेका छन्।
ओली-प्रचण्डले आफूले नेतृत्व गरेका पुरानो जहाजलाई जोर पाइलटका रूपमा सँगै नयाँ ब्रान्डका रूपमा उडाए पनि तल्लो तहसम्मको एकता टुंग्याउन नसक्दा सुरक्षित अवतरण गराउन सकिरहेका छैनन्। यही गन्जागोलकै बीच नेकपाले अब एकता प्रक्रियामा विलम्ब गर्न सक्ने अवस्था छैन। नेतृत्व माथि परेको चौतर्फी दबाबबीच पार्टी स्थापना दिवसका दिनसम्म एकता टुंग्याउने पछिल्लो कार्यतालिका नेताहरूले सार्वजनिक गरेका छन्।
तर नेतृत्वको छद्म लडाइँका कारण यो कार्यतालिका म्याच हुनेमा अझै आशंका नै छ। विगत कार्यदलको पहिलेका सिफारिसका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा ओली छन्। नेपाल पार्टीमा एक पद एक व्यक्तिको अडानमा रहने र वरिष्ठतालाई आधार मानेर निश्चित विधि बनाई एकता टुंग्याउन दबाब बढाउने योजनामा छन्। महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा राखेका नेपाल र ओली पक्ष धरबीचको प्रतिस्पर्धा एकअर्कालाई नसहने हदमा देखा पर्न थालेको छ।
प्रचण्ड भने तत्कालीन एमाले भित्रका दुवै खेमा (ओली-नेपाल) का बीचमा सन्तुलन मिलाउँदै आफ्नो लागि वातावरण बनाउने रणनीतिमा छन्। यो व्यक्तित्व टकरावले कुन नेताहरूलाई कहाँ पुर्‍याउँछ आगामी महाधिवेशनले नै तय गर्छ।